Wararka - Horumarinta mustaqbalka ee kuwa ku hadla wireless-ka
Wax soo saarka Karaoke
Horumarinta mustaqbalka ee kuwa ku hadla wireless-ka
Waxaa la qiyaasayaa in laga bilaabo 2021 illaa 2026, suuqa ku hadla wirelesska adduunka uu ku kori doono isugeyn koror sanadle ah oo ka badan 14%. Suuqa kuhadalka wirelesska aduunka (oo lagu xisaabiyo dakhliga) wuxuu gaari doonaa koritaan buuxda 150% inta lagu jiro mudada saadaasha. Inta lagu jiro mudada 2021-2026, dakhliga suuqa wuu kici karaa, laakiin kobaca sanadlaha wuxuu sii socon doonaa hoos udhaca intaas kadib, badanaa sababtuna tahay kororka heerka dhexgalka dadka kuhadlaya caqliga adduunka.
Sida laga soo xigtay qiyaasaha, marka la eego rarka unugga laga bilaabo 2021-2024, iyadoo ay ugu wacan tahay baahida xooggan ee loo qabo aaladaha casriga ah ee ka imanaya Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Aasiya-Baasifigga, oo ay weheliso sii kordheysa qalabka qalabka maqalka wireless, sannad-sannadka koritaanka kuwa ku hadla wireless-ka waxay gaari doonaan laba lambar. Baahida sii kordheysa ee suuqa sare, soo saarista tikniyoolajiyadda codka lagu caawiyo ee qalabka guryaha iyo suuqgeynta alaabada casriga ah ee internetka ayaa ah qodobbada kale ee waaweyn ee keenaya kobaca suuqa.
Marka laga eego aragtida qaybaha suuqa, oo ku saleysan isku xirnaanta, suuqa ku hadla af-hayeenka caalamiga ah waxaa loo qaybin karaa Bluetooth iyo wireless. Kuwa ku hadla Bluetooth waxay leeyihiin astaamo badan oo cusub, iskugeynta rooga iyo adkeysiga biyaha ayaa la filayaa inay sare u qaado baahida macaamiisha inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Intaas waxaa sii dheer, nolosha batteriga oo dheereysa, 360-digriiga dhawaqa hareeraha ah, nalalka la hoggaamin karo ee la habeyn karo, shaqooyinka iswaafajinta arjiga iyo caawiyeyaasha caaqilka ah ayaa alaabtan ka dhigi kara mid soo jiidasho leh, taas oo saamayneysa koritaanka suuqa. Dadka ku hadla Bluetooth-ka ee aan biyuhu xirnayn ayaa aad ugu soo badanaya Maraykanka iyo waddamada Galbeedka Yurub. Ku hadlayaasha ruxruxsan ayaa ah kuwa aan naxdin lahayn, aan wasakh lahayn oo aan biyuhu xirin, sidaa darteed waxay caan ku yihiin isticmaaleyaal badan oo adduunka oo dhan ah.
Sannadka 2020, qaybta suuq-dhamaadka ah ee shixnadaha unugyada ayaa lagu tiriyaa in ka badan 49% saamiga suuqa. Si kastaba ha noqotee, qiimaha hooseeya ee aaladahaan suuqa ku jira awgood, wadarta dakhliga wuu yaryahay inkastoo unugyada sare la soo raraa. Qalabkani waa mid la qaadi karo oo bixiya tayada codka oo aad u fiican. Qiimaha hoose ee moodelladan ayaa la filayaa inay soo jiitaan isticmaaleyaal badan oo deganaansho maxaa yeelay moodooyinkani waxay bixiyaan fudayd iyo habboonaan.
Sanadka 2020, dadka ku hadla heerka waxay ku mashquuli doonaan suuqa iyagoo leh saamiga suuqa in ka badan 44%. Baahida dalabka ee gobolka Aasiya iyo Baasifigga iyo Latin Amerika ayaa ah qodobka ugu weyn kobaca suuqa. Sannadkii la soo dhaafay, gobolka Aasiya iyo Baasifigga waxaa laga filayaa inuu soo saaro ku dhowaad 20% dakhli koror ah.
Waxaa lagu qiyaasay in sanadka 2026, in kabadan 375 milyan oo kuhadla wireless-ka lagu iibin doono wadiiqooyinka wax lagu qeybiyo (oo ay kujiraan dukaamada qaaska ah, supermarkets iyo hypermarkets, iyo dukaamada elektarooniga ah). Soosaarayaasha Wi-Fi iyo kuwa ku hadla afka Bluetooth waxay soo galeen suuqa caadiga ah waxayna kordhiyeen iibinta kuwa ku hadla caqliga iyagoo adeegsanaya dukaamada tafaariiqda ee adduunka oo dhan. Kanaallada wax lagu qaybiyo ee internetka ayaa la filayaa inay gaaraan 38 bilyan oo doollarka Mareykanka sanadka 2026.
Marka la barbardhigo dukaamada tafaariiqda, dukaamada internetka ayaa bixiya xulashooyin kala duwan, taas oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee keena koritaanka. Tafaariiqleyda internetka waxay ku bixiyaan qalabka qiimo jaban, halkii ay ka heli lahaayeen liistada liistada ee ku habboon dukaamada elektaroonigga ah iyo kanaallada kale ee wax lagu qeybiyo. Si kastaba ha noqotee, sida soosaarayaasha dhaqanka iyo kuwa kale ee qalabka elektaroonigga ah la filayo inay soo galaan suuqa, qaybta qadka tooska ah waxay wajihi karaan tartan adag oo ka imanaya qaybta tafaariiqda mustaqbalka.
Tirada sii kordheysa ee fikradaha tiknoolajiyada guryaha casriga ah ee gobolka Aasiya iyo Baasifigga ayaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato suuqa ku hadla af-mareenka. In ka badan 88% macaamiisha ku nool Shiinaha waxay leeyihiin xoogaa faham ah guriga casriga ah, kaas oo la filayo inuu noqdo xoog dhaqaajiya awoodda teknolojiyada guryaha casriga ah. Shiinaha iyo Hindiya ayaa hadda ah kuwa ugu dhaqsiyaha badan kobaca dhaqaalaha ee gobolka Aasiya iyo Baasifigga.
Markay tahay 2023, suuqyada guryaha ee caqliga badan ee Shiinaha ayaa la filayaa inay ka bato 21 bilyan oo doollarka Mareykanka ah. Saameynta Bluetooth uu ku leeyahay qoysaska Shiinaha waa mid aad u muhiim ah. Inta lagu jiro muddada saadaasha, korsashada xalalka otomaatiga iyo alaabada ku saleysan IoT waxaa la filayaa inay kordhaan 3 jeer.
Macaamiisha Jabbaan waxay leeyihiin wax ka badan 50% ka warqabka tikniyoolajiyadda guryaha casriga ah. Koonfurta Kuuriya, qiyaastii 90% dadku waxay muujiyaan inay ka warqabaan guryaha casriga ah.
Jawiga adag ee tartanka awgeed, isukeenid iyo isku biirid ayaa ka muuqan doonta suuqa. Arrimahan ayaa ka dhigaya alaab-qeybiyeyaasha inay kala soocaan wax soo saarkooda iyo adeegyadooda iyadoo loo marayo soo jeedin qiimo leh oo gaar ah, haddii kale ma awoodi doonaan inay ku noolaadaan jawi aad u tartan badan.
Microphone Karaoke Wireless ah, Karaoke Microphone la qaadan karo, Hees Cajiib ah Karaoke Player, Muuqaalka Miracast,